Ny valanaretina no fahavalo, fa tsy… | NewsMada
Ny valanaretina no fahavalo, fa tsy…
Raha misy ady an-trano toy inona aza ao amin’ny tokantrano iray, manambatra hery ho azy ny iray trano raha vao misy fahavalo manafika avy ivelany. Tsy ifampiandrasana na ifanentanana inona izany, raha mbola mahatsiaro tena ny tsirairay fa iray trano; eny, na miady toy inona aza. Tsy avela hobaboin’ny fahavalo ny trano iombonana, na horavany sy hanjakazakany ny fananana iraisana.
Tsy izany ve izay tokony hitranga sy hiainana amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa izao? Raha ny marina, tokony ho mafy no ho ny teo aloha aza ny firaisankina, fifanomezan-tanana, fifampitsinjovana. Mahery vaika sy haingana be ny fisehon’aretina izao. Mila mifanaraka amin’izany na mihoatra aza ny hery enti-miady, manohitra, mandresy.
Mby aiza àry izay hery izay? Hatramin’izao, miseholany etsy sy eroa ihany ny fiheveran-tenan’ny sasany ho hany mahalala izay tokony hatao, mahay izay mahasoa, mahavita zavatra. Tsy mety sy tsy mahasoa avokoa izay rehetra lazaina sy ataon’ny fitondram-panjakana? Tsy ny fahavalo iombonana no atao ho zava-dehibe sy mahamaika, fa izay hanovokovohana sy hanozongozonana fanjakana.
Fisaraham-bazana na fampizarazarana an-toerana no ndeha hiatrehana ny fahavalo iombonana tafiditra an-trano? Tsy mifidy na manavaka olona, mahery vaika be… Raha mbola misy ny fahatsiarovan-tena ho Malagasy, indrindra ny hoe fitiavan-tanindrazana: tsy tokony handeha ho azy ve ny hoe fifampitsimbinana eo amin’ny olon-drehetra amin’ny maha mpiray ra sy ny maha olombelona aloha?
Alohan’ny zavatra rehetra izay fitandroana aina izay. Na ny an’ny tena io, na ny an’ny hafa. Tena mandripaka aina ange, rey olona, ity hoe valanaretina Covid-19 andiany faharoa e! Loza iray, loza roa. Nefa mbola misy miady sisiny ihany amin’itsy sy iroa. Tsy tokony ho tena hampiombona amin’ny firaisankina ve ny fahavalo iombonana? Tsy sanatria izany indray no ndeha hampiady an-toerana.
Iza na inona no tena fahavalom-pirenena: ny valanaretina sa… ? Dieny tsy mbola tonga amin’ny fihibohana, aleo manambatra hery amin’ny ady atao.